Mitete tavoahangy Silica Gel -Plastic manavaka Equipment - China Henan Suyuan Lanning
Silica gel -plastic manavaka fitaovana
Izany no tena ampiasaina ny fanasokajiana ny silica gel, fingotra sy ny plastika any amin'ny raikitra plastika ny fako tokantrano fitaovana plastika, PP plastika sy ny silica gel amin'ny mpitsabo mba hampahahendry tavoahangy sy hampahahendry kitapo, fako bateria tavoara sy ny silica gel plug, plastika sy ny silica gel in fitaovana hafa torotoro fo herinaratra.
1. manavaka ara-batana, Tsy misy ny fandotoana ny tontolo iainana; Low vidin'ny fitaovana fanjifàna angovo sy ny asa.
2. Ny singa fototry ny fitaovana no nafarana, antoka ny marina sy azo itokisana ny manavaka ny fitaovana; Ny fanaraha-maso plc anjara amin'ny boky fampianarana lamba miasa mora foana mahatonga ny fandidiana.
3. amin'ny efitra anatiny izay fifandraisana amin'ny fitaovana mandany Stainless vy sy Chrome voapetaka, izay mampitombo ny manavaka ny marina sy ny fanompoana mainka fiainana ao amin'ny fitaovana.
4. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny fitaratra friction sy bouncing teoria, ny plastika, silica gel araka ny marina sy ny fingotra dia nisaraka, ary ny ambony indrindra dia afaka manavaka fahadiovana hahatratra mihoatra ny 99%.
5. Ampy fitaovana mandeha ho azy miaraka amin'ny sakafo Adjustable rafitra, rafitra ara-nofo fanandratako, rafitra manavaka, mandeha ho azy hiverina ara-nofo sy ny vokatra farany fanatanterahana rafitra, ny rehetra fototra azo miasa amin'ny alalan'ny olona iray ihany.
Previous: Medical Aluminum Plastic Package manavaka-dalana,
Manaraka: Motor hanorotoro fanodinana producton tsipika
Fanafody Plate Recycling